ब्लड प्रेसरको बारेमा यी कुरा झूट हुन्- सत्य कुरा के हो त? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
ब्लड प्रेसरको बारेमा यी कुरा झूट हुन्- सत्य कुरा के हो त?
‘ब्लड प्रेसर’ यानिकी रक्तचाप, जसलाई ‘हाइपरटेन्सन’ (Hypertension) पनि भनिन्छ। यसले हाम्रो मुटु, मस्तिष्क र अन्य अङ्गहरूमा नकारात्मक असर पुर्याउँदछ। बगिरहेको रगतले रक्तनलीमा दिने चाप वा दवाव नै रक्तचाप हो। अनि जब मुटुका धमनी अथवा रक्तनलीको भित्ता बाक्लो हुँदै जान्छ, तब त्यहाँ रगतको बहाव बढ्दै जान्छ र फलतः रक्तचाप बढ्दै जान्छ।
स्वस्थ शरीरको रक्तचाप भनेको १२०/८० एमएम एचजी (120/80 mm Hg) हुनुपर्दछ। यदि कुनै व्यक्तिको रक्तचाप १४०/९० भन्दा बढि भैरहन्छ भने त्यसलाई उच्च रक्तचाप भएको मानिन्छ। उच्च रक्तचापले थाहै नदिई व्यक्तिको ज्यान लिने गर्दछ। त्यसैले आफ्नो रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नु सबैको कर्तव्य हुन आउँदछ।
तर, कतिपयले रक्तचापको बारेमा यस्ता कुराहरू पनि विश्वास गर्छन्, जुन एकदमै मिथ्या हुन्छन्, जसको कुनै तर्क हुँदैन। यस्ता झूट कुराहरूलाई प्रकाशमा पारेर सत्य के हो भन्ने बारेमा आज हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गैरहेका छौँ।
उम्रेको गेडागुडी दिनहुँ खानुहोस्, रक्तचाप अनि ग्यास्ट्रिकबाट राहत पाउनुहोस्- अन्य ८ फाइदा
रक्तचाप तथा रतन्धोको लागि गाँजर! गाँजरका अन्य ७ फाइदा
रक्तचाप घटाउन दैनिक खानैपर्ने ५ खानेकुरा
दिउँसो सुत्ने बानीले रक्तचाप नियन्त्रणब
घरेलु उपायबाट रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नुहोस
उच्च रक्तचाप किन हुन्छ ? जानौ कारणहरू…
Previousचीनसँग काठमाडौं र लुम्बिनीसम्मै रेलमार्गको प्रस्ताव – युवराज ज्ञवाली
Nextसिरियामा रसियाले प्रयोग गरेका ५ घातक हतियार